स्कूल बालिका लागि वर्ण जूता धेरै कुराहरू निर्भर गर्दछ। आज, छोराछोरी र आमाबाबुको छनोट एडी मा लेख र मानक मोडेल एक कम कदम रूपमा प्रस्तुत छ। के जूता बालिका 12 वर्ष पुरानो लागि एक स्कूल चयन गर्न?
सबै भन्दा राम्रो कसरी निर्धारण गर्ने?
यौवन अवस्था को चरण मा भएका बच्चाहरु, आमाबाबुको लागि एकदम कठिन छ। यस समयमा, सक्रिय कुनै पनि वरपरका कुराहरू आदर व्यक्तिगत राय गठन। स्कूल पोशाकहरू, विशेष गरी जूता को विकल्प कुनै अपवाद छ।
स्कूल बालिका लागि जूता फैशन रुझान को सबै सुविधाहरू हुन सक्छ। तर, यो कि प्राथमिकता उच्च एडी दिइएको हुनुपर्छ होइन। कम एडी समलम्ब संग आकर्षक र स्टाइलिश जूता, पंपों हेर्न यो Suffice। केही कोमल र rhinestones, रिबन, अन्य सजावटी तत्व जस्तै विभिन्न उत्पादनहरु को उपस्थिति संलग्न आकर्षण पनि।
बालिका लागि एक स्कूल लागि जूता देख, लोकप्रिय विकल्प फोटो, विशेष ध्यान मोडेल कुन हाडजोर्नी Insoles छ सीधा तलवों, संग भुक्तानी गर्नुपर्छ। स्कूल विद्यार्थी छैन बढी उन्नत साथीहरूको साथ राख्न चाहने, यो निर्णय सहमत छैन भने, त्यसपछि स्थिर एडी औसत उचाइ मा जूता खरीद मान्य विकल्प।
स्कूल जूता 5-7 घण्टा कम्तिमा दैनिक, बच्चाको खुट्टा हुनेछ। तसर्थ, प्राथमिक आवश्यकता उच्च गुणवत्ता निर्माण कार्य गर्दछ।
बालिका 'विद्यालयहरूको लागि बच्चाहरु जुत्ता "सास फेर्न।" छ बच्चालाई तातो हुन्छ, यो अतिरिक्त वस्त्र हटाउन सक्ने क्षमता छ। आफ्नो मोजा मा रहन आफ्नो खुट्टा आराम दिन, पनि ब्रेक मा यस्तो तरिका मा आन्दोलन उल्लेख छैन, वर्ग बेला डेस्क बसिरहेको, समस्याग्रस्त छ।
पहिलो स्थानमा छ भने बाहिर प्राकृतिक Insoles र वेंटिलेशन लागि सानो vents राम्रो अनुकरण छाला को एक मोडेल रूपमा सेवा गर्न सक्षम प्राकृतिक सामाग्री बनेको उत्पादनहरु गर्न बचत वैकल्पिक खरीद गर्दा। गुणस्तर जूता कहिल्यै रसायन जस्तै गंध हुनेछ। मान्य छाला मात्र बेहोश गन्ध वा सुखद सुगन्ध लागि विकल्प छैन।
विद्यालयमा बालिका लागि राम्रो जूता मुख्यतया बच्चाहरु को लागि उपयुक्त हुनुपर्छ। यसलाई प्राथमिकता उत्पादन साना Fashionista को भाग मा साँचो चासो छ भने पनि, धेरै संकीर्ण वा नजिक भिन्न दिन आवश्यक छैन। त्यसैले, यो सान्त्वना र पुनरावेदन बीच एक समझौता पाउन सिक्न महत्त्वपूर्ण छ।
गर्नुपर्छ बच्चा उत्प्रेरित गर्छ कसरी सजिलै ध्यान, चयन जूता लगाएका, को खुट्टा flexes। एकमात्र आवश्यक खुट्टाको औंलासम्म अपेक्षाकृत मुक्त औंला गर्न स्थिर एडी नमनीय र चिप्लो छैन हुन अनिवार्य छ।
विद्यालयमा बालिका राम्ररी जो दिनमा आफ्नो खुट्टा दल्नु हुनेछ विस्तार seams, अनियमितताहरु लागि आफ्नो भित्री भाग जांच गर्नुपर्छ लागि स्टोर जूता प्रस्ताव विचार। एउटै कारणले यो जूता बट किन्न छैन राम्रो छ। विकास को लागि जूता खरीद एकै समयमा घाइते संग fraught छ।
संग कुनै पनि सरकार एजेन्सीहरू रूपमा, शैक्षिक संस्थाहरु एकदम कडा शैली पूरा पोशाकहरू स्वागत गर्दछौं। यो आधारित स्कूल मा बालिका को लागि जूता सामाग्री को धारणा देखि विद्यार्थीहरू विचलित हुनेछ कि एक रंग हुनु हुँदैन। herein नीलो, मरुन, गाढा हरियो, परम्परागत कालो रंग को रोकी रंग रुचाइएको छन्। सजावटी तत्व, चमकदार गहने को एक प्रशस्त संग छैन स्वागत मोडेल।
कि छोराछोरी, विशेष गरी स्कूल, जूता फोहोर चाँडै बिर्सन छैन। त्यसैले आवश्यक फेरि प्रत्येक दिन पनि हल्का वा साबर लेख हेरविचार गर्न धैर्य हुनेछ कसरी सोच्न छ।
उच्च एडी मा बालिका को लागि स्कूल जूता
उमेर आवश्यकताहरू संग उपस्थिति स्वामित्व जवान fashionistas appreciably वृद्धि बीचमा। स्वाभाविक, हरेक Schoolgirl संग जूता चयन गर्न खोज्छ थप प्रभावकारी साथीहरूको बीचमा हेर्न चाहन्छ र त्यसैले एडी उच्च। तर, 12 वर्ष को बालिका यो समयमा मुद्रा को एक सक्रिय गठन छ किनभने अप, यो विकल्प दिन सिफारिस गरिएको छ। आमाबाबुले कुनै विकल्प छ भने, तपाईं 3-5 सेमी को कम, स्थिर एडी संग जूता खरीद सीमित राख्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
छनौट लागि सुझाव
तपाईं किनमेल जाने अघि, तपाईं उपयुक्त मोडेल प्रकार मा अन्त निर्णय गर्न, यो क्लासिक पंप, जुत्ता, मंच जूता र यति मा हुन आवश्यक छ। पनि लायक अनुमान, विद्यमान दराज मनपरेको विकल्प केही लुगा संग संयुक्त थप सुरिलो हेर्न हुनेछ।
मुख्य चयन मापदण्ड लागि जाँदा, त्यसपछि तिनीहरूले कुनै पनि योजना को जूता लागि नै हो। पहिलो स्थानमा व्यावहारिकता, उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता र सुविधा परे छ।
सिफारिस गरिएको छ आफ्नो बच्चा संग किनमेल जानुहोस्। कुनै पनि मामला मा यो आँखा गर्न जूता चयन वा उपयुक्त मोडेल, एक टेम्पलेट रूपमा गत्ता प्रयोग गरेर ढाँचा फेला पार्न प्रयास गर्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा यो गल्ती, मात्र होइन आकार तर पनि आकार, उठाने उचाइ, अन्य महत्वपूर्ण मापदण्डहरू बनाउन सम्भव छ।
न त हामी अपेक्षाकृत तंग जूता समय फैलाउन छ आशा गर्नुपर्छ। खुट्टा जो धेरै बेचैनी हुन सक्छ छिटो बढ्दै केही Schoolgirls।
कसरी घर मा लुगा रंग बन्द धुन
पत्थर टापु: कि टालो मतलब?
चड्डी र लेग्गीन्स: फरक र समानता के छ
छल्ले लागि तकिया के हो?
खुजली पाम? रोग छैन - चिन्ह!
"Admiralty सुई" - कविता Aleksandra Sergeevicha Pushkina को विश्लेषण
कसरी Windows7सीतनिद्रा सक्षम: साधारण समाधान
Rotenberg बोरिस Romanovich - ज्ञात खेलाडी र उद्यमी
प्लास्टिक छत - 20 औं शताब्दीको आक्रमण!
शीर्ष मास्को रेस्टुरेन्ट: मूल्याङ्कन, वर्णन र ग्राहक समीक्षा
"Kruzenshtern" - एक छाल विगतका पौराणिक